Isu tinoongorora nei Android isiri 100% yakavhurika-sosi purojekiti | Linux Vakapindwa muropa
Ko Android ndeyechokwadi yakavhurika-sosi system?
Android Inotengeswa kwatiri seyakavhurika sosi sisitimu, asi muchinyorwa chino tichaongorora kana ichi chiri chokwadi cheizvi uye kusvika pamwero watinogona kuzvitenda. Sezvo isu tese tichifanira kuziva, Android ndiyo Google's inoshanda sisitimu yemidziyo nhare. Android ine Linux kernel uye nekudaro musimboti wayo mahara software, kuwedzera kune akawanda matekinoroji ayo ainayo.
Asi zvese AOSP (Android Open Source Project) yakavhurika here? Mhinduro HAPANA, uye ikozvino ndinoivandudza. Android haisi yakavhurika sosi, kufunga kuti iri rakavhurika-sosi chirongwa chikanganiso chikuru. Chiitiko chakaitika svondo rino chakabvisa kusahadzika kana fungidziro uye chakasimbisa iyi nhau. Vazhinji venyu vangave makasiiwa vakashama miromo, asi ndozvazviri. Chokwadi ndechekuti Jean-Baptiste Queru, mukuru weAOSP akasiya chigaro chake chekutonga nyaya iyi. Queru akapa iyo Nexus semuenzaniso uye akataura kuti system yacho haigone kutanga pasina chikamu chekodhi yakapihwa neQualcomm, inova yakavanzika. Kana iwe haugone kutanga iyo huru skrini isina yakavharwa kodhi iyo vanogadzira GPU vanopa nemadriver avo. Asi kwete izvo chete, Microsoft yaitawo mari kubva kune mazhinji emvumo inosanganisirwa mumidziyo yeApple.
Google nevamwe vayo vagadziri vemidziyo Nesisitimu ino vanogovana hukama hwepedyo hwekuvandudza uye Android inosanganisa akawanda akavharwa echitatu-bato matekinoroji. Iyo proprietary matekinoroji ivo havape yavo kodhi uye nekudaro havana kusununguka. Saka ndichijekesa marudzi ese ekusahadzika uye semhedzisiro, ini ndinobvunza mubvunzo zvakare: Icho chakavhurika sosi? Mhinduro yekupedzisira CHIKAMU, zvikamu senzvimbo tsanga uye mamwe maraibhurari uye zvinhu EHE, vamwe vatyairi uye zvikamu zvekodhi zvinopihwa nevagadziri HAPANA.
Mamwe mashoko - Microsoft inobhadharisa kutengesa kweApple uye Chrome OS zvishandiso
Kunobva - eWeek
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ko Android ndeyechokwadi yakavhurika-sosi system?
Damn, mwana aifanira kunyura kuitira kuti vanhu vazhinji vazive kuvepo kwetsime, handigone kuzvitenda xD. Zvakaipa hapana anoshanda TT kugadzira zvinotsiva zveavo madhiraivha, ndanga ndave kuda kuisa inofanirwa pane yangu smartphone, asi nekuda kweavo madhiraivha ¬ ¬ uye mamwe mafomu anodikanwa kuti ashandise nhare ini handigone. Cannonical ine yayo inotakurika ubuntu asi cannonical haichandifadzi ¬ ¬ zvikamu zvakawanda zvekodhi yayo hazvisunungurwe (ubuntu) yekupedzisira sarudzo yemafoni firefox asi TT iri pachena kuti ndiani anopa mari mozilla uu nezvido zviri kuseri kwayo. Panogona kusambove neepachokwadi yemahara inoshanda sisitimu yemidziyo yenhare xx
uye ndiani ane hanya kana akasununguka kana kwete
C4 Injini, ingangoita imwe nzira yeUnited 3D uye Leadwerks